Iiyunivesithi zaseburhulumenteni zaseMelika zifaka uPhuculo lweSoftware kwiKharityhulamu | Ndisuka mac
Iiyunivesithi zaseburhulumenteni zase-US zifaka uPhuhliso lwe-App ngeSwift kwiKharityhulamu
Akuthandabuzeki I-Apple ibandakanyeka kakhulu kwiiyunivesithi zaseMelika kunakwamanye amazwe emhlabeni (Njengoko kusengqiqweni) kwaye oku kuboniswa zezi nkcukacha zinje ngokufakwa kwikharityhulamu yophuhliso lweeapps ngeSwift kwiinkqubo ezingaphezulu kwama-30 zeyunivesithi yoluntu.
Inkampani iya kubonelela ngezi zifundo zintsha ukuze abafundi bakwazi ukwenza izicelo eziza kubalungiselela imisebenzi kumacandelo ophuhliso lwesoftware kunye netekhnoloji yolwazi. Le yimeko yeSithili sase-Austin Community College (i-ACC), lelinye lamaziko amakhulu emfundo ephakamileyo kweli lizwe, izakuqala ukunika le khosi kubafundi bayo abangama-74.000 ukuwa oku.
Inkqubo kwaye ngakumbi inkqubo ngolwimi olukhawulezayo ibaluleke kakhulu kwiApple kwaye bahlala kuyo, enyanisweni iApple ngaphandle kwezicelo zeenkqubo kunye nabaphuhlisi kuncinci abanokukwenza. Ekugqibeleni, abanye bayadingana kwaye kuyacaca ukuba uninzi lweCupertino lutyala imali ekwandiseni ulwimi lwabo lwenkqubo, kokukhona baya kufumana.
Le kharityhulamu ibe yidigri yeenjineli kunye nootitshala beApple ihlala unyaka wonke wokufunda kwaye ifundisa abafundi ukuba benze iiapps besebenzisa iSwift. Le khosi ilungele abafundi abangenamava enkqubo kwaye ibavumela ukuba benze iiapps ezisebenza ngokupheleleyo kuyilo lwabo. Umzi mveliso weApple uxhasa imisebenzi eyi-1,5 yezigidi eMelika. Kunyaka ophelileyo, abaphuhlisi besoftware base-US bazise i-5.000 yezigidigidi zeedola kwiVenkile yeApple, i-40% ngaphezulu kunango-2015. Ukusukela oko kwasungulwa iVenkile yeApple, iApple ihlawule i-16.000 yezigidigidi kubaphuhlisi baseMelika, ngaphezulu kwekota yeApp Gcina ingeniso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Iiyunivesithi zaseburhulumenteni zase-US zifaka uPhuhliso lwe-App ngeSwift kwiKharityhulamu
UApple ufuna ukuthengisa iimovie ezi-4k ngeedola ezingama-20, ngaphandle kokwala izitudiyo ezinkulu
I-CodiGo, umdlalo omtsha wabantwana ojolise kwinkqubo